सबै मानिसहरू बालिका compliments गर्न सक्षम छन् छैन। हाम्रो लेख सिक्न चाहनेहरूलाई लागि हो। Compliments केटी, जो को सजिलो आउन अप गर्न सक्छ सूची, सधैं पुरुष र महिला बीच संचार को एक महत्वपूर्ण भाग भएको छ। तिनीहरूले अति उच्च पहिलो बैठक मा उद्धृत गर्दै हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीं कसरी सफल परिचय निर्भर आफ्नो गुणस्तर मा। सामान्य मा, निष्कर्ष नै छ: एक मानिस शब्दहरू बोल्न सक्षम हुनुपर्छ, उच्चतम स्तर मा संग, केटी compliments। गरेको अनुगमन गर्नुपर्छ भनेर प्रमुख सिद्धान्त ध्यान दिनुहोस् गरौं।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो - साँच्चै र इमानदार प्रशंसा गर्छौं। यो एक केटी गर्न compliments को पूर्व-संकलित सूची तपाईं पहिलो काउन्टर त्यो के हो विशेष गरी प्रशंसा गर्न, उनको खुसी हुन सक्छ प्रस्तुत गर्न सुरु कि असम्भाव्य छ। त्यो छ, प्रत्येक व्यक्ति महिला मा निहित छ मात्र के verbally व्यक्त गर्न आवश्यक छ। यो केटी कुनै फरक साधारण अर्थमा र दूरदृष्टि छ कि स्पष्ट छ, यो एक बौद्धिक कल छैन। चापलुसी हात मा "जाने" गर्न सक्नुहुन्छ, तर भविष्यमा सबै मा बुरा हुनेछ। हृदय देखि प्रशंसा।
सिद्धान्त केही मानिसहरू, compliments कसरी बनाउने थाहा छ, तर सधैं, तिनीहरूले व्यवहार मा लागू गर्न। यसले अलिकति बढी ध्यान र महिला छविको विशिष्ट विवरण सूचना पहिलो बाँकी हुन पर्याप्त छ। लुगा केटी उल्लेखनीय केही छ भने पनि, उनको mannerisms र शरीर सुविधाहरू केन्द्रित छ। उदाहरणका लागि, उनको गाला मा एक मुस्कान को समयमा, dimples देखिन्छन्। मुख्य कुरा - छैन नष्ट गर्न! हामी भन्न सक्छौं: "तपाईंले यस्तो स्वादिष्ट dimples छ! प्राय मुस्कान! "अनि मनमा राख्न धेरै उपयोगी एक तयार सूची केटी compliments। यो विश्वास को कमी हटाउन मद्दत गर्नेछ।
यो सिद्धान्त उत्तरार्द्ध को लडी छ। बैठक को पहिलो केही सेकेन्डमा तपाईं एउटा सुन्दर केश नोटिस र केटी पोशाक गर्दा, त्यसपछि सिर्फ उनको यो बारेमा बताउनुहोस्। एक धन्यवाद रूपमा त्यो तिमी असजिलोपन वा enigmatic मुस्कान प्रदान हुनेछ। र यो सबै भन्दा राम्रो सम्भव अनुकूलन compliments साथ आउन सबै भन्दा राम्रो छ। उदाहरणका लागि, "तिमी राम्री हुनुहुन्छ" एक बिट corny सुनिन्छ। तर प्रशंसा "तपाईं घाम को एक रे जस्तै सुन्दर छन्," मानिस ठीक अक्सर कृपा छैन।
compliments केटी को सूची
हामी आफैलाई साथ आउन एकदम सजिलो विशिष्ट वाक्यांश दिन छैन, र यो एक केटी मा सराहना गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई ध्यान। यहाँ एक नमूना सूची छ:
टाउको: केश, ओठ, मुस्कान, परेलाहरु, आँखा,
शरीर: घाँटी, आंकडा, स्तन, मुद्रा, पेट, कमर, आदि;।
हात छाला, औंलाहरु, मैनीक्योर;
खुट्टा: पेडीक्योर, घुँडा, खुट्टा, नितम्ब, gait।
साथै, शैली, विचार, विश्वास, व्यवहार, कौशल, व्यक्तिगत गुणहरू, र यति मा प्रशंसा गर्छौं। डी सूची लामो समय को लागि मा जान सक्छ। मुख्य कुरा हो - कल्पना को उपस्थिति। सुरुमा तपाईं साँच्चै महिलाहरु को मर्यादा प्रशंसा प्राप्त छैन भने चिन्ता नगर्नुहोस्। अग्रिम केटी compliments सूची बनाउन र अभ्यास जारी। तपाईँले कसरी महिला खुसी हुनेछन् जो प्रशंसा देखि, विवरण सूचना सिक्न हुनेछ। र compliments जस्तै कि सबै बालिका सम्झना। त्यसैले सकेसम्म अक्सर तिनीहरूलाई के!
बढाउनु - यो जानाजानी बढाइचढाइ
लेख एक, एक, को अंग्रेजी भाषा: उपयोग उदाहरणहरु, सामान्यतया
फर्मको अवधारणा र यसको सुविधाहरू
को मिथक र दन्त्यकथा मा समुद्र देवता